Isoftware Echazwe Yisoftware yeGrass Valley Ihambisa Inkululeko Nokuvumelana Nezimo ku-Pike Media Lab - I-NAB Khombisa Izindaba ngu-Broadcast Beat, Umsakazi Osemthethweni we-NAB Show - I-NAB Khombisa
Ikhaya » Izindaba » I-Software ye-Grass Valley-Defined Playout Ihambisa Inkululeko Nokuzivumelanisa Ne-Pike Media Lab
I-Software ye-Grass Valley-Defined Playout Ihambisa Inkululeko Nokuzivumelanisa Ne-Pike Media Lab
I-MONTREAL - 8: I-00 MSK, ngoJuni 27, 2019 -I-Pike Media Lab ishintshele kwisisombululo se-playout kuphela kusuka ku-software Grass Valley. Okumaphakathi kokuthola amandla okusha kwe-playout yi-ICE SDC, exhasa ukusakazwa kwemithombo yevidiyo ye-2022-6 futhi inika amandla umhlinzeki wesevisi yemidiya waseRussia ukukhulisa amamodeli amasha wokuhweba nokusebenza futhi aphathe okuqukethwe okuvela kunoma yimuphi umthombo futhi akusabalalise ngokushesha kunoma iyiphi ipulatifomu.
I-Pike Media Lab inikezela ngezinsizakusebenza zokudlala kuma-platform we-cable kanye ne-OTT eRussia Federation kanye nokufinyelela kuziteshi zaseRussia zezilaleli ezikhuluma isiRussia eNyakatho Melika. Sisebenzisa ubunzima bebhizinisi elinikezwe izixazululo ezichazwe yisoftware, umhlinzeki wesevisi yemidiya manje angakwazi ukukhipha izinsizakalo ezintsha ngokushesha, asekele nezinhlelo zenkampani zokwengeza iziteshi ezengeziwe eRussia naseNyakatho Melika eminyakeni ezayo.
Amandla akhethekile weGrass Valley ukuletha isisombululo sokudlala esiphelele ngokuphathwa kwempahla yemidiya ehlanganisiwe (i-MAM) nokuzenzakalelayo kwaba yinto ebalulekile kuPike Media Lab. Kanye ICE SDC, osebenzisa ubuchwepheshe bokuzenzakalelayo beMorpheus, umhlinzeki wezinsizakalo zemidiya usetshenzisiwe Ukuphathwa kwempahla yabezindaba ye-Momentum, IQ Ukuguquguquka kwemodeli nokusebenza izixazululo kanye Izishintshi ze-Vega routing.
"Izinhlobo zezinsizakalo ezidingwa abathengi zishintsha njalo, ngakho-ke sidinga uhlelo lokudlala olusebenzayo kanye nezinhlelo zokuphatha imidiya ezingakwazi ukuzijwayeza nezinhlobo ezintsha zensiza futhi zisekele izindlela ezintsha zokusebenza," kusho u-Andrey Kovalenko, oyi-CEO yePike Media Lab. “Sinobudlelwano obude obukhona neGrass Valley futhi okuwukuphela kwekhambi labo elasivumela ukuthi sinikeze uhlelo ngendlela ebesifuna ngayo. IGrass Valley isinikeze nenkululeko ephelele yokusebenzisa izinto esizithandayo, ngokunikeza isisombululo sesoftware kuphela esikhipha amandla esiwadingayo kwisabelomali sethu. Iqembu leGrass Valley lisebenze futhi ngokubambisana nathi ukuqinisekisa ukuthi sinendawo yokudlala elungele ibhizinisi lethu. Manje sesinokuhlinzwa okungenza amakhasimende ethu aphendule ngokushesha kulokho okufunwa abathengi - namuhla nakusasa. "
Isimo esibi nesiguquguqukayo sokusebenza kwayo kwe-playout sinika amandla i-Pike Media Lab ukukhulisa ukubuya ekutshalweni kwemali, ngaphandle kokuyekethisa emandleni ayo okutshela izindaba eziphoqayo. I-Momentum MAM nenjini yokuhamba komsebenzi inezela ukuguquguquka okungeziwe, okuvumela iqembu lokukhiqiza ukuthi lakhe ukugeleza kokusebenza okuhlangabezana nezidingo zabo ezithile.
UTim Banks, iphini likamongameli wezentengiso, i-EMEA, iGrass Valley wanezela: “Njengoba abasakazi nezinkampani zemidiya kufanele bazivumelanise ngokushesha nezidingo zabathengi eziguqukayo, izixazululo ezisuselwa kwisoftware ziba zisebenza kakhulu ekusebenzeni kwawo wonke osayizi, ukulethwa kwengqalasizinda enamandla nengagugi engakwazi ukunwetshwa ngokushesha - ngaphandle kokuthola izindleko ezinkulu. Le projekthi ene-Pike Media Lab ibonisa kahle ukuthi le ndlela inendawo enhlobonhlobo yezicelo futhi ikhombisa ukuthi iGrass Valley isebenza kanjani ngokusondelene namakhasimende ukuletha izixazululo ezihambelana nezidingo zawo ezithile. Kuyasijabulisa ukuthi iPike Media Lab iphinde yaphendukela eGrass Valley njengoba ithatha lesi sinyathelo esibalulekile ekuziphendukeleni kwayo, iqinisekisa ukuthi kuzothuthukiswa umsebenzi esizayo oluzokwengeza ukukhula kwalo eminyakeni ezayo. "
I-AfricaCom ibona i-Simplestream ikhombisa indlela esebenza kahle kakhulu kumasevisi wevidiyo yesizukulwane esilandelayo - Novemba 6, 2019
Grass Valley layout Ott I-Pike Media Lab Ama-spears nama-Arrows I-TVU Izinethiwekhi	2019-06-27
Ngaphambilini: Umlingani we-Q India naseMediology ekuthengiseni kwe-Ad
Olandelayo: I-Polecam Limited ibeka "iManos Digital & Film" yokwandiswa kwemakethe e-United States